Sidee loo kala hoggaaminayaa gooldhalinta horyaalka Somali Premier League? – Gool FM
Sidee loo kala hoggaaminayaa gooldhalinta horyaalka Somali Premier League?
(Muqdisho) 15 Jan 2020. Gooldhalinta horyaalka Somali Premier League ayaa sanadkan aad u xiiso badan waxaana isku heesta dhowr xidig oo kala duwan, kuwaasoo rabaan inay hantaan kabta gooldhalinta horyaalka Soomaaliya.
Kabta gooldhalinta waxaa difaacanaya ciyaaryahanka kooxda Elman ee Anwar Shakunda, kaasoo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ku guuleystay gooldhalinta.
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Raadsan ee Mohamed Kyeline ayaa ah laacibka hoggaaminya kala sarreynta gooldhalinta horyaalka kal ciyaareedkan, isagoo leh Shan gool.
Halka xiddigaha kale ay wada leeyihiin min labo gool.
FG: Kala sarreynta gooldhalinta horyaalka Somali Premier League ayaa isbedeli kara haddii xiddigaha ka mid ah gooldhalinta ay goolal ka dhaliyaan kulanka galabta ka dhacaya garoonka Eng Yariisow, kaasoo u dhexeeya kooxaha Rajo FC iyo Dekedda.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida loo kala sarreeyo gooldhalinta horyaalka Somali Premier League:-
RASMI: Kooxdii ugu fiicnayd Champions League sanadkii hore ee 2019 oo la shaaciyey… (Imise ciyaaryahan ayay ku yeelatay Liverpool?)